Ukufaka | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
I-Chives: Ikhalori, ukwakheka, izakhiwo ezizuzisayo kanye nokuphikisana
I-chives, noma i-chives, iyaziwa ngokuthi i-anyanisi skoroda - ukuthola okungokoqobo kumgadi wensimu. Iwusizo kakhulu, inenqwaba yezinto zokwelapha, ihlobisa isayithi ngesikhathi sokuqhakaza, ibeka izinambuzane eziningi zezitshalo nezensimu. Kulesi sihloko uzofunda ngezimfanelo eziwusizo ze-chives nokuthi hlobo luni lwesitshalo.
I-Vladimir-duty duty-horse breed
Imikhiqizo enzima kakhulu, eyaziwa ngokuthi "amaloli anzima", ingenye yezinhlobo ezinkulu zehhashi. Inhloso yalolu hlobo ivela egameni layo; Izimoto ezinzima kakhulu zisetshenziselwa ukuthutha imithwalo esindayo. Ngisho noma ihhashi yenziwe ekuqaleni ukuthuthukisa ezinye izinhlobo, amandla ayo akhishwa omunye, uhlobo oluhlukile lomsebenzi, lapho lingakafaneli lilingane khona.
Zonke izici zezimvu zaseRomanov nezincomo zokuzalanisa ngempumelelo
Kubo bonke abantu baseSlavic, uhlobo oluyinhloko lwenyama luyizinkukhu, nakuba ngisho nokhokho bethu bebekhuthele ekukhuliseni izimvu. Ekhangayo ekhaya, lezi zilwane azikho kakhulu ngenxa yenyama, kodwa zivela ebuhleni obuhle, obuhle obufudumele nokufudumele. Kanti futhi esikhathini esidlule, isikhumba semvu sasiphansi kakhulu, esingashushumbisa ngisho nasebandleni eliqine kakhulu.
Ukudla kwe-sunflower: incazelo kanye nesicelo
Ukudla kwe-sunflower kuwumkhiqizo owusizo kakhulu owenziwe kabanzi kwezolimo. Ngenxa yokusetshenziswa kwesidlo se-sunflower, kungenzeka ukwandisa kakhulu ukukhiqizwa kwezinyoni nezilwane. Kulesi sihloko sizokhuluma ngokudla kwe-sunflower, ukuthi kuyini nokuthi kufanele isetshenziswe kanjani.
Isifo samathambo yisinye sezifo zezifo zezinkomo. Ngenhlanhla, ayinayo inkinga enkulu futhi iyaphathwa ngokuphelele. Uma ubhekene nenkinga efanayo, futhi ungazi ukuthi wenzeni, lesi sihloko singokwakho. Izimbangela zokwakhiwa Amatshe amatshe angama-milk powder akhiwa ngenxa yokufakwa kwe-phosphate usawoti noma lapho i-calcium ixoshwa emanzini ase-casein.